Ungaziphakamisa njani izakhiwo ze-3D kuMhlaba kaGoogle -Geofumadas
Ikhaya/Google umhlaba / imephu/Indlela yokuphakamisa izakhiwo ze-3D kuGoogle Earth
Uninzi lwethu luyasazi isixhobo soMhlaba sikaGoogle, yiyo loo nto kule minyaka idlulileyo siye sabona indaleko yayo enomdla, ukusinika izisombululo ezizezona zihambelana nokuqhubela phambili kwetekhnoloji. Esi sixhobo siqhele ukusetyenziselwa ukufumana iindawo, ukufumana iindawo, ukukhupha izihlanganisi, ukufaka idatha yendawo ukwenza uhlobo oluthile lokuhlalutya okanye ithuba lokundwendwela indawo, inyanga okanye iMars.
UGoogle Earth usilele ekuphatheni idatha enamacala amathathu, kuba isizukulwana sayo sixhomekeke kwizicelo zomntu wesithathu apho kulungiswa khona iziseko zophuhliso, izakhiwo okanye iimodeli ezinamacala amathathu. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufumana umbono okhawulezayo we-3D wezakhiwo kwindawo ethile, kufuneka ube nedatha ngesandla efana nale:
Ubungakanani bento okanye isakhiwo
Ekuqaleni isicelo sivula, kwimenyu ephambili, isixhobo sibekwe Yongeza i-polygon, kuvulwa iwindow, ebonisa ukuba isixhobo sikulungele.
Ngomsebenzi ochazwe apha ngasentla, chaza inqanaba lesakhiwo esifunekayo, kwithebhu u-estilos ¸ Guqula umgca kunye nokugcwalisa umbala, kunye nokusebenza kwawo.
Kwiphepha Ububanzi Iiparamitha zokutshintsha le polygon ibe yi-3D ziya kubekwa. Ezi paramitha zezi:
Chaza imeko, kule meko Inxulumene nomhlaba Faka ukhetho kwimenyu eyehlayo.
Kwimeko efanelekileyo yokuyilwa, ibhokisi kufuneka ihlolwe Ukusasaza ngamacala onke emhlabeni
Ukuphakama: kuchazwe ngokutsala ibha phakathi komhlaba kunye nendawo, kufutshane umhlaba, kumazantsi ophakamileyo.
Ngale ndlela ulwakhiwo lwakhiwe ngefomathi ye-3D, kunokwenzeka ukuba wenze iipiligoni ezininzi xa kukho imfuneko.
Namhlanje, uhlaziyo lube kukuba iGoogle itshintshe umxholo wesicelo, ivumela ukufikelela kwisikhangeli - ukuba nje yi-Chrome -, kunye nezixhobo zayo nganye. Isibonisi sinokuhanjiswa ngokulula, kunye ne-3D, ukuBonwa kwesitrato, ukubonwa kwendawo kuyabonakala, kunye nokubonisa kwimeko yebhaluni yemeko, kanye kanye kwindawo okhangela kuyo.
Le vidiyo ibonisa indlela ukudalwa kwezakhiwo ezinemilinganiselo emithathu kuGoogle Earth.
Ikhosi ye-ArcGIS Pro kunye ne-QGIS 3 - kwimisebenzi efanayo
I-STAAD-Yenza iNdibano yoYilo oluSebenzayo kunye neLungelelweyo ukuxhasa uxinzelelo lwezakhiwo-eNtshona Indiya.
Indlela yokuphucula umbono we-3D kwiGoogle Earth